ANKATOAVANA NY ANTSON'NY TOMPO NY FINOANA | FJKM Amboniloha
ANKATOAVANA NY ANTSON’NY TOMPO NY FINOANA
Mba efa nametra-panontaniana ve ianao ry mpamaky malala hoe : Maro ny asa fitoriana ny filazantsara tanterahina toy ny Tafika Masina, mihamaro ny fiangonana mitsangana sy ny olona miditra am-piangonana ; Fa maninona anefa no voalaza fa ny ankamaroan’ireo olona ambara fa vato misakana ny fandrosoan’ny firenena dia ireo olona mpiditra am-piangonana ? Toa tondroan’olona molotra ny Kristiana ankehitriny : nantsoin’ny Tompo ary antenaina ho fahazavan’izao tontolo izao isika kanefa tsy dia hitan’ny olona loatra ao amintsika io Fahazavana io, indrindra eny amin’ny fiarahamonina andavanandro dia diso fanantenana izy. Ny mpanankato malagasy iray raha maneho ny heviny momba izany ao amin’ ny tononkirany dia milaza fa ny mpivavaka dia mandohalika eo amin’ny alitara, mirehareha ho mpivavaka kanefa manana toetra maramara, toa tsy misy mahasamihafa azy amin’ny tsy mpiditra am-piangonana aza matetika. Ö ry Kristiana havana, mampieritreritra anie izany e ! Mampandinin-tena koa. Matoa tsy mbola sitrana fa marary ny tanintsika dia tsy tena mbola tanteraka marina ho fiainan’izay nantsoin’Andriamanitra tamin’ny Anarany ny fanetren-tena tena hitady ny tavan’Andriamanitra sy ny fialàna amin’ny ratsy fanaony (II Tan.7, 14).
Kristiana ve ianao ? Olona nantsoin’Andriamanitra tamin’ny Anarany ? Tena te handray anjara amin’ny fampandrosoana marina ity firenena malalantsika ity araka ny sitrapon’Andriamanitra ve ianao : hahasitrana ny taninao ? Ireto misy torohevitra omen’ny Tompo izay miantso anao ny amin’izay tokony hataonao hahatanteraka izany :
– Tsarovy fa « Masina Jehovah Tompon’ny maro » izay miantso anao ary mitaky anao hanokana ny fiainanao ho Azy fa tsy hisakaiza amin’izao tontolo izao (Jak.4, 4). Aoka hahay hanavaka ny masina sy ny tsy masina ianao fa hitoetra ao amin’ny Fahamasinan’Andriamanitra « Aoka ho masina ianareo satria masina Aho Jehovah Andriamanitrareo (Isa.6, 3 ; Lev.19, 2). Hevi-diso ny fiheverana fa afaka miaraka ny fahalotoana eto amin’izao tontolo izay sy ny fahamasinan’Andriamanitra. Raiso ho tena Tompo sy Mpamonjy hanapaka ny fiainanao Jesoa Kristy, amin’ny fonao fa tsy amolotra na amin’ny fomba ivelany fotsiny io . Mibebaha, mialà amin’ny fanaova-ndratsy (fahotàna), atolory ho Azy ny fonao, Izy ny hanefy anao fa hanome anao ny fiainam-baovao ao Aminy, feno fahasambarana sy fiadanana. Fa raha misy olona ao amin’i Kristy dia tonga olom-baovao izy (II Kor.5, 17) ;
– Aoka hanaiky hotefen’Andriamanitra ianao ka ho tena mpanompo mahatoky Azy hatramin’ny fahafatesana. Fanaka voafidy ho fitondrana ny Anaran’ny Tompo ianao (Asa.9, 15) ;
– Aoka tena hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinana ianao ary hitaona ny olona hivavaka toa izany koa (Jao.4, 23). Esory eo aminao izay endriky ny fihatsarambelatsihy rehetra (Joe.2, 13) Aoka hiaina sy hivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra isan’andro ianao. « …MAINKA SAMBATRA AZA NY MIHAINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA KA MITANDRINA IZANY », hoy Jesoa (Lio.11, 28);
– Aoka hanaiky sy hankato fa tsy handositra ny antso anirahan’ny Tompo anao ianao na dia sarotra aza ny iraka ampanaoviny anao (Jon.3.2) Momba anao Izy (Mpi.6,12). Aza mitady tany malemy anorenam-pangady e ! Sahia mitaona ny olona hibebaka, hiala amin’ny ratsy fanaony mba handraisany ny famelan-keloka ao amin’Andriamanitra, na dia mety hiaretanao ny mafy aza ny fanaovana izany (Asa.2, 38). Ataovy Lohalaharana ny fiheverana ny olona hovonjena (ara-nofo, ara-tsaina, ara-panahy) fa tsy ny tombontsoa na ny fitakiana zo ho an’ny tenanao toy ny vola sy ny harena na voninahitra (Fil.2, 5-8) ;
– Mazotoa manavao ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra isan’andro. « Inty aho, iraho aho », hoy Isaia raha nantsoin’ny Tompo (Isa.6, 8). Amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra no anatanterahana izany (Jao.15, 5) ;
Aoka hiezaka hanatratra ny marika hahazoanao ny lokan’ny fiantsoan’Andriamanitra any ambony ao amin’i Kristy (Fil.3, 14). Aoka tsy hila sitraka avy amin’ny olona ianao fa amin’i Kristy irery ihany izay mbola hampamoaka anao amin’ny fanatanterahanao ny iraka nampanaoviny anao eo amin’ny sehatra izay anirahany anao. Ao amin’ny Tompo no tena misy ny valim-pitia ho anao (Gal.1, 10 ; Mat.25, 21,23).